DEG DEG Ciidamada Galmudug oo gacanta ku dhigay hub culus oo loo waday Ahlu-Sunna - Allbanaadir Media
Home Warka Maanta DEG DEG Ciidamada Galmudug oo gacanta ku dhigay hub culus oo loo...
DEG DEG Ciidamada Galmudug oo gacanta ku dhigay hub culus oo loo waday Ahlu-Sunna
Ciidanka Daraawiishta Galmudug, oo saacadihii la soo dhaafay ku jiray heegan buuxa ayaa deegaanka Galinsoor ee gobolka Galgaduud ku qabtay hub loo waday maleeshiyaadka Ahlusunna ee dhawaan qabsaday magaaladda Guriceel ee gobolka Galgaduud.
Sida uu sheegay Gaashaanle Maxamed Cabdi Cabdulle oo ku sugan deegaanka Galinsoor waxa uu sheegay in gacanta ku dhigeen gaari nuuciisa lagu sheegay “Niic” oo siday rasaas farabadan iyo gantaaladda garabka laga tuuro.
Hubkaan ayuu sheegay in uu rumaysanyahay in laga soo dhiibay dhanka Dowlad-goboleedka Puntland oo daris la ah Galmudug maalna galisa Kooxda Ahlusunna ee ka dagaalanta bartahama Soomaaliya.
Sarkaalka ayaa intaasi ku daray in ay xireen wadihii gaariga iyo labo ruux oo la socotay, hubkana loo gudbi doono magaaladda Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug.
Sarkaalka ayaa intaasi ku daray in hubka uu isku jiro rasaasta nuucyada kala duwan iyo qoryahay Dhashiikaha, sabanka garabka laga tuuro, qoriga Soomaalidu u taqaano dabajeex iyo qoryo kale cusub oo hada baaritaan lagu wado halka laga soo dhiibay.
Arrintaan ayaa imaanaysa iyada oo Galbolka Galgaduud ay ka socdaan abaabul ciidanka amaanka Galmudug ay ku weerarayaan magaaladda Guriceel ee gobolka Galgaduud ee Bartamaha Soomaaliya.
Dagaalka ka dhanka ah Ahlusunna ayaa waxaa ku midaysan mucaaradka, muxaafadka iyo maamuladda Dalka maadaama kooxda loo arko in ay Qatar ku tahay amaanka deegaanada maamulka Galmudug iyo guud ahaan Soomaaliya.